40W LED masoaryro kianja fahazavana zaridaina fahazavana mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Garden Light > masoandro zaridaina fahazavana > 40W LED masoandro kianja fahazavana zaridaina fahazavana
Mampiasa jiro an-tsokosoko CCFL miaraka amin'ny hazavana mitovy amin'ny famirapiratan'ny jiro marevaka 70W ny jiro solar. Ny haavon'ny jiro dia 3m ary ny fiainana jiro dia mihoatra ny 20000 ora. Ny famatsiana herinaratra dia mampiasa takelaka satroka monocrystalline 35W ary mpanova fotoana voafetra.......
Mampiasa jiro an-tsokosoko CCFL miaraka amin'ny hazavana mitovy amin'ny famirapiratan'ny jiro marevaka 70W ny jiro solar. Ny haavon'ny jiro dia 3m ary ny fiainana jiro dia mihoatra ny 20000 ora. Ny famatsiana herinaratra dia mampiasa takelaka satroka monocrystalline 35W ary mpanova fotoana voafetra. Ny vanim-potoana hiantanan'ny kalitao dia 25 taona. Rehefa afaka 25 taona, ny singa amin'ny bateria dia afaka manohy ampiasaina, fa ny andrian'ny herinaratra dia mihena kely. Ny rafi-pamokarana herinaratra dia tsy mahatohitra rivo-doza, hamandoana ary taratra ultraviolet. Ny rafitra dia afaka miantoka ny fotoana fiasana isan'andro ka hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 6 ora ao anatin'ny tontolo 40 Â ° C ~ 70 Â ° C; raha eo ny orana mitohy, ny angovo fanampiny voaangona ao anaty bateria, mba hahazoana antoka fa ny mpampiasa amin'ny andro orana mandritra ny 2 ka hatramin'ny 3 andro dia mbola ampy ny famatsiana herinaratra afaka ampiasaina amin'ny mahazatra. Ny fampitahana eo amin'ny jiro zaridaina fotovoltaika sy ny jiro zaridaina mahazatra: ny vidin'ny fametrahana voalohany ny jiro zaridaina fotovoltaika dia 120% ka hatramin'ny 136% amin'ny jiro zaridaina mahazatra, ary ny vidin'ny iraisan'izy roa dia mitovy ihany aorian'ny roa taona ampiasaina. .
Izy io dia ahitana singa momba ny sela solar, bracket, poleta jiro, mihazona jiro, vovo-jiro manokana, bateria, boaty bateria ary ireo takelaka vita amin'ny vita amin'ny monocrystalline na polycrystalline silikon. Ny lohan'ny jiro dia marevaka, maro loko ary miloko ary azo atao ny maka ny jiro zaridaina hanaingoana ny kianja sy ny kianja ary ny kianja filalaovana. Ny vokatra dia azo hazavaina tsy tapaka mandritra ny 4-5 andro miaraka amin'ny herinaratra ampy, ary afaka mandeha 8 ka hatramin'ny 10 ora isan'andro. Izy io dia azo namboarina ihany koa arakaraka ny zavatra takian'ny mpampiasa manokana.
Hot Tags: 40W LED masoandro kianja fahazavana zaridaina fahazavana, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style